၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာ မူပိုင်ခွင့်ပြပွဲအား ဟန်ကျိုးမြို့၌ ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ်၊ ချင်းသောင်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ပြပွဲတွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖန်တီးထားမှုများအား ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေသည့် ဧည့်သည်တစ်ဦးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဟန်ကျိုး၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်ပြပွဲအား တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၊ ဟန်ကျိုးမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်အမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှု (NCAC) မှ ကမကထပြု၍ ကျဲ့ကျန်း ပြည်နယ်မူပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန နှင့် ဟန်ကျိုးမြို့ အစိုးရတို့မှ စီစဉ်သော ယင်းပြပွဲသည် မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းများတွင် နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုများနှင့် အားပေးဖလှယ်မှုများ ခင်းကျင်းပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စတုရန်းမီတာ ၃၀,၀၀၀ နီးပါးရှိသောပြပွဲဧရိယာ၌ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ကုမ္ပဏီနှင့်အဖွဲ့အစည်း ၃၀၀ ကျော် ယင်းပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကမ္ဘာ့နည်းပညာမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (WIPO) နှင့် NCAC တို့သည် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဆုများနှင့် မူပိုင်ခွင့်အသုံးချမှုဆုများ၊ မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်မှုနှင့် မူပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုများ အပါအဝင် WIPO-NCAC မူပိုင်ခွင့်ဆုများအား ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲနှင့် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဗွီဒီယိုအတိုပလက်ဖောင်းများ စသည့် နယ်ပယ်များ၌ မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ ခေါင်းစဉ်များဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများအား ပြပွဲအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ NCAC မှ စတင်ကျင်းပခဲ့သော အဆိုပါပြပွဲသည် မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ပြသခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်း၌ ကူးလူးဖလှယ်မှုများ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်း၌ ကုန်သွယ်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်းအတွက် အရေးပါသောအလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
HANGZHOU, Oct. 16 (Xinhua) — The eighth China International Copyright Expo opened on Saturday and will run until Monday in Hangzhou, capital of east China’s Zhejiang Province.
The expo, launched by the NCAC since 2008, serves as an important platform for showcasing China’s development in copyright protection, promoting exchanges in the international copyright industry and facilitating trade in China’s copyright industry. Enditem